जान्नुहोस् यस्तो छन् गहुको जमरा र यसको सेवनका फाइदाहरू
आइतवार, जुलाई 12, 2020
खानपान हेल्थ टिप्स
गहुको जमरा र यसको सेवनका फाइदाहरू
सेप्टेम्बर 28, 2018 नोभेम्बर 17, 2018 साइन्स इन्फोटेक	6 Comments जमरा, डा. राम बहादुर बोहरा
फाइबरयुक्त गुणका कारण पछिल्लो समय गहुको जमरालाई स्वास्थ्यकर खानाका रुपमा लिइन्छ । चिकित्सकहरुका अनुसार पोषकतत्वले भरिपूर्ण गहुँले मुटु रोग,पाचन प्रक्रिया, क्यान्सर तथा टाइप-२ मधुमेहको जोखिम कम गर्छ । चिकित्सकहरुका अनुसार मानिसका लागि गहुँ जति स्वस्थकर छ, उमारेको गहुँबाट बनेको जुस त्योभन्दा धेेरै फाइदाजनक छ । त्यसैले गहुँको जुस पृथ्वीकै सर्वोत्कृट स्वस्थ्यकर जुसमध्ये पर्छ ।
गहुको जमराको जुसको फाइदाहरू
जौका जमारामा जस्तो नभएपनि यसमा पनि भिटामिन, खनिज, एमिनोएसिड आदि पाइन्छ । यसले विभिन्न किसिमको भिटामिन प्रदान गर्छ । जमराले कलेजमा भएको विशाक्त पदार्थलाई हटाउँन र ठूलो आन्द्रा सफा गरी शरीरमा स्फुर्ति बढाउँन, पाचन शक्ति मजवुत् बनाउँन, रगत सफा राख्न मद्दत गर्छ ।
क्यान्सरको उपचार लगायत विभिन्न किसिमका भिटामिन, इन्जाइम, खनिज लगायत महत्वपूर्ण तत्व हुन्छ । रोग प्रतिरोध क्षमता बृद्धि गर्ने गुण र मासुभन्दा बढी प्रोटिन एवं शरीरमा चोटपटक लाग्दा छिटो निको गराउँने हुनाले मधुमेहीलाई फाइदा गर्छ ।
बैज्ञानिक दृटिकोणले जमराको महत्व
जमराको रसको फाइदा
गहुँको जमरा धेरै उपयोगी
← सेक्स क्षमता बढाउन अनारको महत्वपुर्ण भूमिका
मुटु रोग र यसको उपचार →
सर्पगन्धा (Rauvolfia Serpentina Q ) Mother Tincture र यसको प्रयोग
फ्रेवुअरी 25, 2019 अप्रील 12, 2019 साइन्स इन्फोटेक 2
स्वास्थ्यमा लापरबाही यस्तो छ ?
अक्टोबर 17, 2018 साइन्स इन्फोटेक 0
जुलाई 2, 2019 जुलाई 2, 2019 साइन्स इन्फोटेक 2
6 thoughts on “गहुको जमरा र यसको सेवनका फाइदाहरू”
Pingback:जमराको विषयमा मेरो बिचार
Pingback:गहूँको जमराको रसको सेवनका फाईदाहरु
Pingback:फर्सीको मुन्टा खानुका आश्चर्यजनक फाइदाहरू
Pingback:जान्नुहोस् ! यस्ता छन् गुन्द्रुक खानुका फाइदाहरु
Pingback:गर्मीमा काँक्रो खाँदा स्वास्थ्यमा पुर्याउने फाइदाहरु
Pingback:जान्नुहोस् ! यस्ता छन् कुरिलो खाँदा स्वास्थ्यमा हुने फाइदाहरु
स्वास्थ्यको लागि करी पत्ता खानुका फाइदाहरु
मन, बुद्धि, अन्तःकरण र चिदाभास भनेको के हो ?